Kooxda kubada cagta Fiuk 5-2 kaga badisey kooxda Change | Sahan TV
Cayaar xiiso badan ayaa dhemartay labada koox ee kubada cagta Fiuk iyo Change oo ka wada tirsan Seria B magalada Odense ee dalka Denmark.
Qeybta hore ee cayaarta, markii ay socoday 10 daqiido waxaa u surtagashay in ay kooxda Fiuk in ay dhaliyaan goolkii koowaad keddib, waxay la wareegeen cayaarta daqiiqadii 34 waxay dhaliyeen goolkii labaad. Kooxda Change daqiiqadii 43 waxay dhaliyeen goolkii koowaad waxaa lagu nastay qeybta hore 2-1
Markii qeybta labaad la isugu soo laabtay, waxa weerar is dabajoog ah lagu qaaday goolka kooxda Change, waxaana u surtagashay kooxda Fiuk in ay dhaliyaan 3 gool. Kooxda Change daqiiqadii 86 waxay dhaliyeen goolkii labaad.
Cayaarta waxay ku soo gabagabowday 5-2 ay ku badiyeen kooxda kubda cagta Fiuk ( Fyns Internationale Ungdomsklub )